Bipolar Disorder (စိတ်အတက်အကျမြန် စိတ်ဝေဒနာ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bipolar Disorder (စိတ်အတက်အကျမြန် စိတ်ဝေဒနာ)
Bipolar Disorder (စိတ်အတက်အကျမြန် စိတ်ဝေဒနာ) ကဘာလဲ။
Bipolar disorder ဆိုတာ စိတ်အတက်အကျ အရမ်းမြန်စေတဲ့ ပြင်းထန်ဆိုးရွားသော စိတ်ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဒနာရှင်တွေ အနေနဲ့ အရမ်း ပျော်ရွှင်တက်ကြွနေရာကနေ ရုတ်တရက်ကြီး အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်းသွားတာမျိုး ဖြစ်သွားလေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကြားထဲမှာတော့ ရံဖန်ရံခါ ဆိုသလို ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
သင် စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန်တွေမှာဆိုရင် အရာအားလုံးဟာ စိတ်ညစ်စရာ၊ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စရာ ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလည်း စိတ်ပါဝင်စားခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်တက်ကြွချိန်ဆိုရင်လည်း သင်ဟာ အားအင်တွေပြည့်ဝပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမှု အပြည့်နဲ့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဒီလို စိတ်အတက်အကျ မြန်တာဟာ တစ်နှစ်မှာ အကြိမ်ရေ အနည်းငယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ပိုဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတွေမှာတော့ တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ အကြိမ်ရေ အနည်းငယ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါဟာ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ကျောင်းတွင်း စွမ်းဆောင်ရည် တွေကို ပျက်စီးကျဆင်းစေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာမျိုးအထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေ ခံစားနေရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသပြီး ကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
Bipolar Disorder (စိတ်အတက်အကျမြန် စိတ်ဝေဒနာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကုန်ဆုံးခါနီး တဝိုက်မှာ စတင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ကလေးတွေရော၊ အရွယ်ရောက်ပြီး လူကြီးတွေမှာပါ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
စိတ်အတက်အကျမြန် ရောဂါရှင်တွေရဲ့ အနည်းဆုံး ထက်ဝက်လောက်ဟာ အသက် ၂၅နှစ်မတိုင်ခင်မှာ ရောဂါစတင် ခံစားရတာဖြစ်ပြီး ဘဝတလျှောက်လုံး ခံစားသွားရလေ့ရှိပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Bipolar Disorder (စိတ်အတက်အကျမြန် စိတ်ဝေဒနာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
စိတ်အတက်အကျမြန်ရောဂါ ရှိနေပြီဆိုရင် ပြင်းထန်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော စိတ်ခံစားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတဲ့ ကာလတွေကို ကြုံတွေ့ခံစားရမှာပါ။ သင့်ရဲ့ ပုံမှန် စိတ်ခံစားချက်တွေ၊အမူအကျင့်တွေနဲ့ များစွာ ကွာခြားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို ဒီလို ကာလတစ်ခုချင်းဆီမှာ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
အရမ်းပျော်ရွှင် စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အချိန်ကာလကို “ စိတ်ကြွချိန်” လို့ ခေါ်ပြီး အလွန်အမင်း စိတ်ဆင်းရဲ၊ ဝမ်းနည်း၊မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေတဲ့ ကာလကို “ စိတ်ကျချိန်” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
တခါတလေလည်း ကာလတခုထဲမှာပဲ စိတ်ကြွတာရော၊ စိတ်ကျတာပါ ရောထွေးခံစားရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါမျိုးကို “ ရောပြွန်းနေတဲ့ ကာလ” လို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက် အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကာလတွေမှာ သင့်အနေနဲ့ ဒေါသတကြီးဖြစ်တာမျိုး၊ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ စိတ်ကြီးနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲတာနဲ့အတူ အားအင်၊လှုပ်ရှားမှု၊အိပ်စက်တာ နဲ့ အပြုအမူ၊အမူအကျင့်တွေလည်း အစွန်းရောက်အောင် ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
စိတ်ကြွချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ရောဂါလက္ခဏာများ
• အလွန်ပျော်ခြင်း ၊စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း
• အလွန်ကို ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်ခြင်း
• ပုံမှန်ထက် အစားအသောက် ပိုစားခြင်း
• ဇွတ်တရွတ်လုပ်ခြင်း၊အန္တရာယ်များတဲ့၊အပျော်အပါးနောက်လိုက်တဲ့ အမူအကျင့်တွေ ပေါ်လာခြင်း
• စကားပြော အရမ်းမြန်ခြင်း၊စကားပြောရင် တောင်ရောက်မြောက်ရောက် ဖြစ်နေခြင်း
• စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း အားနည်းခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုခုကို အလွယ်တကူ မချနိုင်ခြင်း
• နားထဲမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အသံတွေ ကြားနေရခြင်း၊ တကယ်မရှိတဲ့ အရာတွေကို မြင်နေခြင်း
စိတ်ကျချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ရောဂါလက္ခဏာများ
• အချိန်အတော်ကြာအောင် အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်းနေခြင်း၊မျှော်လင့်ချက်တွေ ကုန်ဆုံး၊စိတ်ဓါတ်ကျနေခြင်း
• နေ့စဉ်လှုပ်ရှား သွားလာမှုတွေကို စိတ်မပါတော့ခြင်း
• ငိုက်မျဉ်းပြီး အိပ်ချင်နေခြင်း
• သိမ်ငယ်စိတ်တွေ ဝင်နေခြင်း
• သတ်သေချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်နေခြင်း
ဒီလို စိတ်အတက်အကျမြန်တဲ့ ကာလတွေဟာ တစ်နှစ်မှာ အကြိမ်ရေ အနည်းငယ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သလို ၇ရက် တစ်ခါလောက်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင်ကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် သင်ချစ်ခင်မြတ်နိုးရသူတွေမှာ ဒီလို ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကုသရပါမယ်။
• စိတ်အတက်အကျ မြန်တဲ့ ကာလတွေက အချိန်အတော်ကြာအောင် ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေလျှင်
• သတ်သေချင်တဲ့ အတွေးတွေ ပေါ်လာလျှင်
• စိတ်တိုစိတ်ဆတ်၊ ဒေါသတွေကြီး၊ ရန်လိုနေလျှင်
• အိပ်လို့မရတာ ရက်အတော်ကြာလာလျှင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။
Bipolar Disorder (စိတ်အတက်အကျမြန် စိတ်ဝေဒနာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
စိတ်အတက်အကျမြန် ရောဂါ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း အတိအကျကို မသိရှိရသေးပေမယ့် ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေတော့ ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေကတော့
• ဦးနှောက်တွင်း ဓါတ်ပစ္စည်းတွေ ပြောင်းလဲမှု။ ဦးနှောက် နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် neurotransmitters လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်တွင်း ဓါတုပစ္စည်းတွေပါ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီဦးနှောက်တွင်း ဓါတုပစ္စည်းတွေက သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ထိန်းချုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
• မျိုးဗီဇ ။ မိဘ၊ဒါမှမဟုတ် တခြား မိသားစုဝင်တွေမှာ ဒီရောဂါရှိမယ်ဆိုရင် သင့်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးလာနိုင်ပါတယ်။
• လူမှုဆက်ဆံရေး အခြေအနေ။ လေ့လာသုတေသန ပြုချက်တွေအရ စိတ်အတက်အကျမြန်ရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ လူမှု ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးမှုတွေ အများကြီး ရှိတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဒီလွှမ်းမိုးမှုတွေကတော့ ငယ်စဉ် ကလေးဘဝမှာ စိတ်ဒါဏ်ရာ ရခဲ့တာတွေ၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်တန်ဖိုးထားမှု မရှိတာတွေ ဒါမှမဟုတ် ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူ တယောက်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာတွေ စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Bipolar Disorder (စိတ်အတက်အကျမြန် စိတ်ဝေဒနာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
စိတ်အတက်အကျမြန် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
• စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခံစားနေရတဲ့ ကာလတွေ
• မိသားစုထဲမှာ ဒီရောဂါဖြစ်ဖူးတဲ့ ၊ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေရှိခြင်း
• စိတ်ဒါဏ်ရာရခြင်း (ဥပမာ ချစ်ခင်မြတ်နိုးရသူ တစ်ယောက်ယောက် ရုတ်တရက် ဆုံးပါးသွားခြင်း)
Bipolar Disorder (စိတ်အတက်အကျမြန် စိတ်ဝေဒနာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
စိတ်အတက်အကျမြန် ရောဂါ ဟုတ်မဟုတ် အတိအကျ သိနိုင်ဖို့အတွက် စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်တွေ အနေနဲ့ အောက်ပါစစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
• ခန္ဓါကိုယ်ကို ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး စမ်းသပ်ခြင်း ။ ဒီလို စမ်းသပ်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ။ သင့်စိတ်ခံစားမှု၊ စိတ်အတက်အကျဖြစ်တဲ့ ကာလတွေ၊ အမူအကျင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ အများကြီး မေးပါလိမ့်မယ်။
• ဒိုင်ယာရီလို မှတ်ခိုင်းမယ် ။ သင့်ရဲ့ အိပ်စက်မှု အနေအထား၊ စိတ်ခံစားမှု နဲ့ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို မှတ်တမ်းတင် ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှသာ ရောဂါအတိအကျ သတ်မှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Bipolar Disorder (စိတ်အတက်အကျမြန် စိတ်ဝေဒနာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အရှင်းပျောက်အောင် ကုသလို့မရနိုင်ပေမယ့် သင့်ရဲ့ စိတ်အတက်အကျ မြန်မှုကိုတော့ တည်ငြိမ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုကုသမှုတွေ ပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ သင့်ရဲ့ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရောဂါအခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ နည်းတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။
• သောက်ဆေးနဲ့ ကုသခြင်း ။ သင့်စိတ်ခံစားမှု အခြေအနေတွေကို တည်ငြိမ်စေဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆေးတွေက သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကျတဲ့ ကာလတွေ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်စိတ်ဖြစ်တဲ့ ကာလတွေ ဖြစ်ပေါ်မလာစေဖို့အတွက် ဆေးကို အချိန်ကြာကြာစွဲသောက်ဖို့ လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ဆေးတွေက စိတ်ကျဝေဒနာမှာ သုံးတဲ့ဆေးတွေ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေ၊ စိတ်ရောဂါကုဆေးတွေ နဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ် လျော့ကျစေတဲ့ ဆေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
• နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး အကြံပေးခြင်း ။ သင်လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေကို နားလည်ပြီး ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်ရမလဲ ဆိုတာကို ကူညီပေးနိုင်မယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရပါမယ်။ သင့်လိုပဲ ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေ စုပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစုအဖွဲ့လေးတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဖွဲ့လေးတွေနဲ့လည်း ဆက်သွယ်ပါဝင်ကြည့်ရင် အကျိုးထူး ပါလိမ့်မယ်။
• မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း ။ တကယ်လို့ သင်ဆေးစွဲနေတယ်ဆိုရင် ဒါကို အရင်ကုသဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဆေးစွဲနေရင် ရောဂါကုသရတာ ပိုခက်စေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
• ဆေးရုံတက်ခြင်း ။ ရောဂါပြင်းထန်ရင် အခြေအနေကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက် ဆေးရုံတက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လောက် ပြင်းထန်ရင်လည်း ဆိုတာကတော့ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ကြိုးစားခြင်း၊ စိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်း စသည့် အခြေအနေတွေ ရှိလာရင် ပြင်းထန်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေဖြစ်လာရင် သင့်ကိုယ်သင်သာမက ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပါ အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
လူနာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အနေအထားချင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာချင်း အတိအကျမတူညီနိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုကုသမှုပုံစံက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် စိတ်အတတ်အကျ မြန်ရောဂါ ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• သင့်မှာ သတ်သေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ပေါ်ပေါက်လာနေပြီဆိုရင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသူ တယောက်ယောက်ကို အမြန်ဆုံးပြောပြပါ။
• အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ။ အိပ်ချိန်မှန်ပါစေ။
• ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်မှု မှန်မှန်လုပ်ပါ။
• ပူဆွေးကြေကွဲ စိတ်ညစ်ညူးရတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ဝေးဝေးရှောင်ပါ။
• အရက်၊ မူးယစ်ဆေး မစွဲပါစေနဲ့။
• အကယ်၍သင့်မှာ မေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် သင့်တော်တဲ့ အဖြေရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
New Jersey: John Wiley &amp; Sons, Inc, 2009. Print edition. Page 870.
Depression. http://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression/index.shtml. Accessed July 23, 2016.
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/bipolar-disorder-in-children-and-adolescents/index.shtml. Accessed July 23, 2016.
Symbyax (prescribing information).
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021520s041lbl.pdf. Accessed July 23, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 26, 2018